Iimbono zamaShishini amaNcinci angama-52 kuBantwana ukwenza imali - Umntwana
52 Creative Business Ideas Kuba oosomashishini abancinci ukwenza imali
Kukho iingcamango ezininzi zoshishino zabantwana, ezinokubanceda balole izakhono zabo zoshishino besebancinci. Ukuphonononga izakhono zoshishino zomntwana wakho esemncinane kuneadvan'//veganapati.pt/img/kid/88/52-creative-business-ideas.jpg' alt="Umhlohli womculo iingcebiso zoshishino lwabantwana">
Ukuba umntwana wakho unokucula okanye adlale isixhobo, banokunikela ngezifundo zomculo kwiontanga zabo okanye bathathe inxaxheba kwimisitho ukuze bafumane imali.
7. Ipeyinti yobuso
Ukupeyinta ubuso ngumsebenzi omnandi ocetyiswayo kubantwana abangaphezulu kweminyaka emithathu. Ukuba umntwana wakho ulungile ekupeyinteni ubuso kunye nokudlala ngemibala, unokumnceda ukuba anikezele le nkonzo ngemihla yokuzalwa okanye amaqela e-Halloween.
8. Igcisa lebhaluni
Iipati zabantwana aziphelelanga ngaphandle kweebhaluni. Ukuba umntwana wakho uyazi amaqhinga ambalwa kwaye unokuba nobuchule bokuhombisa ibhaluni, unokufumana imali entle ngokunikezela ngale nkonzo.
Abantwana abanomdla kubugcisa kunye nemisebenzi yezandla banokwenza imizobo, imizobo, okanye ezinye iziyilo kwaye bazithengise njengamakhadi okubulisa, amakhadi okuposa, njl.
Ukuba umntwana wakho unobuchule bokubhala elwazi kakuhle ulwimi, unokunikela ngeenkonzo zokubhala okanye zokuhlela kwiingcali. Basenokunceda abafundi abafuna uncedo ngokubhala, igrama, okanye iilwimi ezithethwayo.
11. Umbhaki weholide
Ukuba umntwana wakho uyakuthanda ukubhaka amaqebengwana, amaqebengwana, njl.njl., unokumqeqesha ngexesha leeholide kwaye uqalise ishishini ngexesha leeholide.
12. Umsebenzi wokufaka idatha
Abantwana abaqhelene ne-spreadsheets kunye neenkqubo zokusetyenzwa kwamagama banokufumana umsebenzi wethutyana oguquguqukayo kwindawo yokungena idatha ngaphandle kwemali eyinkunzi okanye imali enkulu yokuqalisa.
13. Isipho esongwayo
Iinkonzo zokuvala izipho zinokuthathwa njengeshishini elincinci ukufumana imali ekhawulezayo. Abantwana bakho banokufumana ubuchule bokusonga ngokongeza amaqhina akhangeleka emhle, izincedisi, amanqaku, njl.njl.
14. Ingcali yokuhombisa iholide
Abantwana abaneengcamango ezikhethekileyo, zokuhombisa ezitsala amehlo banokufumana imali kwizakhono zabo ngokunikela iinkonzo zokuhombisa ngexesha leeholide ezifana neKrisimesi (umhombiso womthi), iDiwali (izinto zokuhombisa ukukhanya), okanye eminye imibhiyozo.
15. Umkhathaleli owalupheleyo
Ukuba unomntwana onokuba liqabane elilungileyo labalupheleyo, uncedo kwizinto eziyimfuneko, ukucoca, notyelelo lukagqirha kubadala, le nkonzo inokukunceda ufumane iimali ezingakumbi.
16. Umnini stand isiselo esishushu
Abantwana abafuna ukwenza imali eyongezelelekileyo ebusika banokuthengisa iziselo ezishushu, njengekofu okanye iti kwiindawo abahlala kuzo, ezipakini, okanye kwiimbutho. Ukongeza, gcina ezinye izinto onokukhetha kuzo, kubandakanya iikuki, izinja ezishushu, okanye iimarshmallows ukunceda ekuhambeni kwemali eyongezelelweyo.
17. Umncedisi woluntu
Abantwana abazimisele ukunceda abantu abasweleyo banokunxulumana nemibutho yasekuhlaleni ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla kunye nemisebenzi abayabelweyo. Abo bangafuni ukuvolontiya banokukhetha imisebenzi ehlawulwayo.
18. Umcebisi wokusetyenziswa kwe-Smartphone/Apps
Abantwana banamhlanje baqhelene nokusetyenziswa kwe-smartphone. Banokwenza imali ngokukhokela abantu abadala malunga neempawu kunye nokusetyenziswa kwee-smartphones, kubandakanya iinkcukacha kunye nee -apps eziluncedo.
19. Umcwangcisi wesidlo kunye nomthengi
Abantwana abadala banokunceda ekucwangciseni ukutya yonke imihla kwaye bathenge izinto ezifunekayo ukwenza eso sidlo. Le nkonzo inokuba luncedo kumsebenzi weengcali ezifumana kunzima ukucwangcisa iimenyu zeentsapho zabo.
uyihlamba njani idayi yetayi ngaphandle kokopha
20. Impembelelo yemidiya yoluntu
Ukuba umntwana wakho unemithombo yeendaba elungileyo yentlalo elandelayo kwaye unobuchule bokwenza umxholo wokubandakanya kuwo onke amaqonga ahlukeneyo, banokucinga ukuba yimpembelelo yemidiya yoluntu. Banokuzuza ngokuthengisa iimveliso kunye neemveliso zentengiso emva kokufumana udumo.
21. Umyili wempahla
Ukuba umntwana wakho unomdla ngokuyila iimpahla, unokuguqula umdla wabo kwisicwangciso soshishino. Unokubakhuthaza ngokubanika izabelo ezincinci okanye ukwenza iimpahla ezinomdla kwimisitho ekhethekileyo efana nemitshato, imibhiyozo, iHalloween, okanye imihla yokuzalwa.
22. Umhlohli webhayisekile
Sisicwangciso somvuzo esilula sabantwana abathanda ukukhwela ibhayisekile kwaye banezakhono zokukhwela ezingaqhelekanga. Banokukhokela abanye ukuba bakhwele ibhayisekile. Usenokubhengeza okufanayo kwibhayisekile yomntwana wakho ukutsalela ingqalelo yabathengi abanokuba ngabathengi.
23. Umququzeleli wesiganeko
Abanye abantwana babonisa umdla omkhulu ekucwangciseni imicimbi kunye namaqela. Ukuqala, unokucela umntwana wakho ukuba acwangcise amatheko amancinci osapho, ngoko kuyabanceda bangene kwisicwangciso seqela lobuchwephesha kunye nolawulo lomnyhadala ukwenza imali kweli shishini.
24. Igcisa lelizwi
Amagcisa elizwi labantwana ayafuneka kwiifilim, kumboniso nakumabonakude. Unokucinga ngokunikezela ngeenkonzo zelizwi ukuba umntwana wakho unelizwi elilungileyo kwaye unokumodareyitha ngokwemfuno yomlinganiswa.
Ukuba umntwana wakho uyakonwabela ukupheka kwaye ulichule kuko, ungangena kwishishini lokupheka. Bacele ukuba baqale ngokuphekela abantu ukutya okulula (abadala, abazali abasebenzayo ngabathengi abanokuba ngabathengi) ebumelwaneni bakho. Ekugqibeleni, ungafudukela kwiinkonzo ezihlawulwa ngokupheleleyo.
26. Ijusi/ umthengisi weLemonade
Indawo yejusi okanye i-lemonade lukhetho olunengeniso kodwa oluphantsi lotyalo-mali lweshishini labantwana. Ungabanceda ukuba bayiqhube lula. Ukubonelela ngeejusi zeziqhamo ezibandayo zomkhenkce kunye neelamuni zinokutsala abantu abaninzi.
27. Umyili wezacholo
Abantwana abanobuchule malunga nezincedisi kunye nobucwebe banokungena kwishishini lokuyila ubucwebe. Qala ngokuthenga izinto zokwenza ubucwebe kwaye uzithengisele usapho, izihlobo okanye kwimiboniso yezandla kunye neemarike ze-intanethi.
28. Umthengi wobuqu
Abantwana abakuthandayo ukuthenga banokuncedisa ekuthengeni umntu okufumanisa kunzima. Ukuba umntwana wakho yifashionista, banokwenza imali ngokunikela ngezinto ezenziwe kwiwadi.
29. Utitshala womdaniso
Ukuba umntwana wakho unezakhono zokudanisa, mvumele ukuba anike iiklasi zokudanisa kwabanye abantwana abafuna ukufunda umdaniso.
30. Umntwana DJ
Abantwana abathanda ukwenza kunye nokuxuba umculo ohlukeneyo banokuba ngaba-DJ abanezixhobo eziyimfuneko kunye noqeqesho. Umntwana wakho usenokuqalisa ukudlala kumatheko, kwimisitho, nakuqokelelo-mali ukuze enze imali.
31. Umyili weenwele zeenwele
Abantwana abanokwenza izixhobo ezintle zeenwele (i-scrunchies, iikliphu, kunye neebhendi zeenwele ezizezakho) kwiipateni ezonwabileyo okanye indibaniselwano yemibala banokufumana imali ngokuyithengisa kwii-fairs okanye kwi-intanethi.
32. Ukuhlamba iimoto
Abantwana banokuhlamba iimoto zabamelwane kwindawo abahlala kuyo ukuze benze imali ngexesha labo lokukhululeka. Basenokungena kwindlu ngendlu, bebuza ukuba kukho nabani na oselumelwaneni ofuna ukuvaswa iimoto ngeerandi ezimbalwa.
33. Umbhali ozimeleyo
Abafundi abangababhali abalungileyo banokubhala ngokuzimeleyo ukuze bafumane iirandi ezongezelelweyo zethutyana. Ukubhala ngokuyilayo nokubhala amabali kudityaniswe nemifanekiso kuvuzwa kakhulu.
34. Umhlohli wezifundo
Ukuba umntwana wakho unobuchule bokufundisa, unokunikela ngeenkonzo zokufundisa kwabanye abafundi ngokubanceda balungiselele iimvavanyo okanye bamfundise izifundo eziqhelekileyo kumanqanaba ahlukeneyo.
35. Umenzi wekhandlela
Ukwenza amakhandlela ahlukeneyo kunokuba ngumbono olungileyo weshishini lomntwana. Abantwana banokusebenzisa izakhono zabo zokucinga ukwenza amakhandlela enziwe ngokwemilo enomdla besebenzisa amavumba ahlukeneyo, izixhobo kunye nemibala.
uyibeka kanjani itel kumthi wekrisimesi
36. Ingcali yokuthengisa imidiya yoluntu
Unokusebenzisa izakhono zosasazo zomntwana wakho ekuboneleleni ngoncedo kumashishini asekhaya afuna ukunyuselwa.
Ukuba umntwana wakho unezakhono zokuchwetheza ngokukhawuleza, banokwenza imali ngokuba ngumbhali-mibhalo. Basenokukhuphela iindawo zonyango okanye iimuvi.
Ukufota kunokuba lithuba elihle loshishino kubantwana abathanda ukuthatha imifanekiso. Ekuqaleni, unokumnceda umntwana wakho aqale ishishini elincinci elisekwe ekhaya ngaphambi kokuseka istudiyo.
39. Umhleli weefoto
Ishishini lokuhlela iifoto linokunceda umntwana wakho enze imali ukuba uyayazi indlela yokusebenzisa isoftware yokuhlela ifoto kwaye unomdla okhethekileyo wokuhlela kunye nokwenza imifanekiso emihle kwesele ikhona.
40. Umgcini wesilwanyana
Abantwana abalungileyo malunga nezilwanyana zasekhaya banokunikezela ngeenkonzo zokuhlala izilwanyana (ezicocekileyo, ezondla, njl.njl.) xa zifunwa ngabanini-zilo-qabane.
41. Igcisa leComic/Fiction
Ukuba ufumana umntwana wakho enomdla ekubaliseni amabali okanye kwiicomics, mkhuthaze ukuba abhale. Ke, qala ukuthengisa ukubhala kwabo phakathi kwabahlobo kunye nosapho, ukuqala, kwaye ekugqibeleni upapashe.
42. Umntu ogcina ingca
Ungaqala ishishini lokhathalelo lwengca ukuba umntwana wakho unomdla wokujikeleza ubumelwane kwaye uthembise ukucheba ingca ngentlawulo ethile.
43. Ukuthengiswa kwegaraji
Abantwana abadadlana banokufumana umvuzo ngokucoca nokulungelelanisa iigaraji okanye iiwodrophu zabantu kwindawo abahlala kuyo.
44. Umhambi wezinja
Abanye abantu bafuna uncedo lokuhamba nezinja zabo. Umntwana wakho usenokulixhakamfula eli thuba ukuze enze umthambo kunye nemali kule nkonzo.
45. Umenzi wekhadi lokubulisa
Amashishini amakhadi okubulisa enzelwe wena afunwa kakhulu. Ukuthengisa imibuliso yokuyila yemihla yokuzalwa kunye neminye iminyhadala kwisangqa sakho kunye namaqonga e-intanethi yindlela ekhawulezayo nelula yokwenza imali yomntwana wakho.
46. ​​Umenzi weelekese
Ngubani ongawathandiyo iilekese? Ekubeni iilekese zasekhaya ziqinisekisa zombini impilo kunye nencasa, unokunceda umntwana wakho enze iilekese njengeshishini elisekelwe ekhaya.
47. Umhlobisi wekhekhe
Abantwana banokuzuza kakuhle ngokuhombisa amaqebengwana ngezihlandlo ezikhethekileyo. Ungamxhobisa umntwana wakho nge-icing, fondant, kunye nemibhobho yokubhobhoza ukuqala.
Abantwana abakwaziyo ukuthunga nokunitha izikhafu neminqwazi emangalisayo, ezenziwe ngesandla banokufunda imali ngokuzithengisa.
49. Umthengisi weentyatyambo
Abathandi begadi bangatyala iintyatyambo kwaye bazithengise njengeentyatyambo.
loluphi uhlobo oluncinci lomvundla
50. Imbaleki ye-Errand
Umntwana wakho unokufumana iikhilogram ezimbalwa ezongezelelweyo ngokuthatha kunye nokuhambisa izinto eziyimfuneko kubantu abakufutshane ngexesha.
Abantwana abathanda ukupeyinta banokuthengisa imizobo yabo ngokuthe ngqo kubathengi, okanye bapeyinte amagumbi okanye iishedi ezikummandla wabo ukuze benze imali ekhawulezileyo.
Abantwana abadadlana abaqeqeshelwe ukuqubha banokuzuza ngokunika izifundo zokuqubha kubantwana abancinci kwindawo yabo nakwindawo ezingqongileyo.
Ukuqala kunye nokuqhuba ishishini kunokuba nzima kodwa kunomvuzo. Ukuqaphela indawo anomdla womntwana wakho, ukulola izakhono zabo, kunye nokubeka italente yakhe emsebenzini ngundoqo. Ukusasaza ilizwi kwimidiya yoluntu kunokunceda kakhulu. Gcina ukhuthaza kwaye uxhasa abantwana bakho ukuba bajonge ngaphaya kweendlela zemveli, fumana indawo yentengiso, kwaye uphumelele kwihlabathi leshishini.
Ukurisayikilisha Imvelaphi Yesilayidi Ekhethekileyo Okuzenzekelayo Uboya Ifenitshala Yangaphandle Abafazi Ishishini Impahla
Amantshontsho akho ayeka nini ukusela ubisi
uyiqala njani co yasekhaya co op
esisiseko yazi imibuzo
Izinto ezixabisekileyo zokujonga kwiivenkile ezithengisa
iimeko zolusu ezibonakala ngathi ziyaluma
indlela yokulahla isepha